सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २५ पुस २०७५)
कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि १० बराबर ७ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट मङ्सिर १२ गते स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीले रू. सय अंकित दरको ७९ लाख २३ हजार ३ सय कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । विक्रीप्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १३ करोड छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँट गरेपछि पूँजी रू. १ अर्ब ९२ करोड पुग्नेछ । बीमा समितिले जीवनबीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ५ सय ७२ मा खुला भएर अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ अंक घट्दै रू. ५ सय ६६ मा बन्द भएको छ । कम्पनीको १ वर्षको अवधिमा उच्च मूल्य रू. ९ सय ६४ र न्यून मूल्य रू. ४ सय ३३ रहेको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको मंगलवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म ६ हजार ३ सय ८५ कित्ता शेयर खरीद र ३ हजार १ सय ४५ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-01-09 - 127 view(s) - abhiyan